အကောင်းဆုံး ဘဲလ်စက်ဘီးမီး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် ဘဲလ်စက်ဘီးမီး စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကျနော်တို့ကဦးဆောင်ဦးရွက်နှင့်နည်းပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ပို့, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှာ ဘဲလ်စက်ဘီးမီး။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းထုံးစံစုပေါင်းစုပ်စီမံကိန်းများအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်တွေကျနော်တို့အများဆုံးစျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များပေးအပ်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့ဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအမြန်ဆုံးပေးပို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအပြားဖောက်သည်တစ်ဦး "ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ဖြစ်လာကြပါပြီစတာတွေကမ္ဘာတဝှမ်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဥရောပ, အိန္ဒိယ, ဂျပန်ပေးစွမ်းပါသည်။
ပုံစံ - JH-401BB
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/bell-bike-light.html
အကောင်းဆုံး ဘဲလ်စက်ဘီးမီး ၀ ယ်ယူပါ။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ ဘဲလ်စက်ဘီးမီး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်း ၀ ယ်သူနှင့်ဖြန့်ချိသူရဲ့အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်ပါတယ်
အရွယ်အစား:၄၀ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20/box 200pc/ctn.,1.၄ အုပ်ဆး.ဒဗလျူ.:7 KGSG.ဒဗလျူ.:၉ ကီလိုဂရမ် သတ္တု&ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်-သံလိုက်အိမ်မြှောင်၌ ဦး တည်ချက်ယေဘုယျသဘောကိုပြသည်.မှတ်ချက်:သံလိုက်အိမ်မြှောင်ပတ်ပတ်လည်တွင်သံလိုက်ဓာတ်ပစ္စည်းများရှိလျှင်,သံလိုက်အိမ်မြှောင်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ. သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသည်/လက်ကိုင်ဘားတပ်ဆင်ထားသောစက်ဘီး ဘဲလ်ကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံလုပ်ပါ Universal bike bell သည်စက်ဘီးအများစုနှင့်အံကိုက်ဖြစ်သည်’s လက်ကိုင်. ကျယ်လောင်ပြီးရှင်းလင်းသောအသံမြည်သံ,လမ်းမှာလူတွေကိုဘေးကင်းစေတယ် အရည်အသွေးမြင့်အလူမီနီယမ်နှင့်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ လက်ကိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် စက်ဘီးအများစုနှင့်အချို့သောစကူတာများအတွက်သင့်တော်သည် ပြတ်သားသောအသံ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသံများသည်သင့်အားစီးနင်းရန်ဘေးကင်းရန်နှင့်သာယာသောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန်ဖြတ်သွားဖြတ်လာများကိုသတိပေးနိုင်သည်.